चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको घडियाल प्रजनन केन्द्रमा गोहीका ४९६ बच्चा कोरलिएका छन् । नारायणी र राप्ती नदी किनारमा सङ्कलन गरिएका ५६३ अण्डाबाट ती बच्चा कोरलिएका हुन् । गत वैशाख १० देखि १३ गतेसम्म ती दुई नदीबाट अण्डा सङ्कलन गरिएको थियो । निकुञ्जभित्र रहेको गोही प्रजनन केन्द्र हेर्दै आएका सरोजमणि पौडेलका अनुसार राप्तीका १० गुड र नारायणीका छ गुडबाट अण्डा सङ्कलन गरिएको हो ।असारको पहिलो साताबाट बच्चा कोरलिन थालेका हुन । सङ्कलन भएका अण्डामध्ये २० वटालाई इन्कुभेटरमा राखिएकामा १४ बच्चा निस्किएका
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको घडियाल प्रजनन केन्द्रमा गोहीका ४९६ बच्चा कोरलिएका छन् ।
एक महिलाको पेटमा १३ वटा बच्चा !
आम रुपमा मानवजातिमा महिलाले एउटा बच्चा जन्माउँछन् । कसै कसैले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने भएता पनि ३ र सो भन्दा धेरै बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या निकै कम हुन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म एकै पटकमा सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउने महिलाको रुपमा अमेरिकाकी नादया सुलेमान छिन्, जसले सन् २००९ मा एकै गर्भबाट ८ वटा बच्चा जन्माएकी थिइन् । यसको […]
तिम्रो मयुरको प्वाँखले बच्चा पायो?
ठूलो हुँदै गएपछि कुनै किताबले उसलाई साथीहरुले भनेझैँ किताब भित्र राख्दा मयुरको प्वाँखले बच्चा पाउँछ भनेर सिकाएन। तर, जिन्दगीले सिकायो, बच्चा पाउन नसक्दा जीवनसाथीले मयुरले आफ्नो प्वाँख त्यागे झैँ त्यागिदिन सक्ने रहेछन् भनेर।
जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउँदै रोनाल्डोको जोडी, तीन महिलाबाट ६ सन्तान
फुटवलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनका जोडी जर्जिना रोडरीगेजले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने भएका छन् । उनीहरुले आफ्ना जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिन लागेको सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका हुन् । ती जुम्ल्याहा बच्चा रोनाल्डोका रोडरीगेजसँगका दोश्रो र तेश्रो बच्चा हुनेछन् । तर रोनाल्डोका उनीहरु जम्माजम्मी पाँचौं र छैठौं बच्चा हुनेछन् । पहिलेका दुईमहिलासँग रोनाल्डोका तीनवटा छोराछोरीहरु छन् । […]
khasokhas.com आश्विन २०७८
अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने महिलाहरुले जान्नै पर्ने कुराहरु
पछिल्लो समय आम महिलाहरुले बच्चा जन्माउँदा अप्रेसन गर्नु पर्ने समस्या बढ्दै गइरहेको छ । बच्चा जन्माउदा गरिने सीजरियन सेक्सन डेलिभरी अर्थात अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउनेलाई लिएर समाजमा थुप्रै भ्रमहरु सुन्न सकिन्छ ।
गर्भमा बच्चाको गतिविधि र महत्व, कहिले चल्छ बच्चा?
महिना बढ्दै जाँदा बच्चा चल्ने क्रम पनि बढ्दै जान्छ र अधिक मात्रामा बच्चा चल्ने भनेको २९ देखि ३८ हप्तामा हो। राम्रोसँग सामान्य तरिकाले बच्चा चल्नु भनेको बच्चाको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको विकास र कामकाज राम्रोसँग भएको भन्ने बुझिन्छ।
यसकारण जन्मन्छन् जुम्ल्याहा बच्चा !
तपाइँको आफन्त वा परिवारमा पनि जुम्ल्याहा बच्चा छन् होला ? तर के कारण जन्मिन्छन जुम्ल्याहा बच्चा भन्ने तपाइँलाई जानकारी छ ? गर्भावस्थामा जुम्ल्याहा बच्चा हुनुका कैयौँ कारण छन् । -यस्तो बच्चा जन्मनुमा ठ्याक्कै कुन कारण हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । २५० गर्भवती महिलामध्ये एक जुम्ल्याहाको सम्भावना हुन्छ । यद्यपि सबै महिलामा यसको सम्भावना हुन्छ । -कुनै नश्लीय समूहमा यस्तो बच्चा जन्मनुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । नाइजेरियामा जुम्ल्याहा बच्चा जन्मने दर निकै बढी छ भने जापानमा निकै कम । -बढी उमेरका महिलामा जुम्ल्याहा बच्चाको सम्भावना पन...
चिनियाँ नागरिकले ३ बच्चा जन्माउन पाउने
एजेन्सी।चिनियाँ जोडीले अब ३ जना बच्चा जन्माउन पाउने भएका छन्।घट्दो जनसंख्याका कारण चीनले एक जोडी आमाबाबुले ३ जनासम्म बच्चा जन्माउन पाउने घोषणा गरेको हो।राष्ट्रपति सी जिनपिङले कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकमा सो नीति पारित गराएका हुन्।यसअघि सन् २०१६ मा चीनले एक बच्चा नीति खारेज गर्दै २ जना बच्चा जन्माउने पाउने नीति लिएपनि जन्मदर नबढेपछि पुनः नयाँ नीति ल्याएको हो।